Isitudiyo sasekhaya saseCouleur kwindlu yesikhumbuzo - I-Airbnb
Isitudiyo sasekhaya saseCouleur kwindlu yesikhumbuzo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSanja
Le studio ibekwe kufutshane nombindi weParamaribo kunye nazo zonke izinto ezibonwayo zesixeko esikuluhlu lwelifa lehlabathi le-UNESCO. Isitudiyo sikwindlu yamaplanga yobukoloniyali kwaye inazo zonke izinto eziluncedo zale mihla.
Le yindawo elungileyo yokuhlola iParamaribo kunye namava obomi kwikomkhulu laseSurinamese kufutshane.
Isitudiyo (esinesango labucala) sikwindlu endala eyenziwe ngamaplanga esikhumbuzo esandula ukubuyiselwa. Zonke izinto eziluncedo zanamhlanje zikhona, kodwa indlu isaphefumla umoya wexesha elidlulileyo.
Le ndlu yakhiwe (njengoko kwakuqhelekile kule ndawo) yakhiwe phezu kweentsika ngoko ke phantsi kwendlu kukho indawo eyaneleyo yokuhlala ngaphandle kwaye yonwabele iingcungcu nezinye iintaka ezifumaneka egadini yonke imihla.
Isitudiyo sinegumbi lokuhlambela labucala elineshawa kunye nekhitshi elinefriji kunye nesitovu soveliso. Kukwakho ne-air conditioning kunye namanzi ashushu.
Le yindawo eqhelekileyo yaseParamaribo apho izindlu ezininzi zamaplanga zisenokubonakala, nangona ngamanye amaxesha zikwimeko embi.
Ngaphakathi komgama wokuhamba kukho ivenkile enkulu yokuthenga yonke imihla kwaye malunga ne-800m ngaphezulu kukho ivenkile enkulu (iTulip) enoluhlu olubanzi kakhulu.
Kukwakho namaqula okuqubha aliqela kunye nesibhedlele esikhulu kumgama wokuhamba.
Umbuki zindwendwe ngu- Sanja
Umamkeli-zindwendwe uya kukwamkela kwaye uya kukuvuyela ukukunceda ngexesha lokuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Paramaribo